Fifandraisana manaraka ny làlan'i Kristy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-04 > Fifandraisana mifanaraka amin'ny ohatr'i Kristy
Nisy olana ara-panahy lehibe tao amin'ny fiarahamonina Korinto. Fiangonan'ny fahasoavana izy, saingy simba ny fahatakarany ny filazantsara. Mazava ho azy fa nisy "ra ratsy" teo anelanelan'ny Korintiana sy Paoly. Ny sasany dia nanontany ny hafatry ny apostoly sy ny fahefany. Nisy ihany koa ny fifandrafiana teo amin'ireo samy mpiray tampo amin'ny sokajy sosialy samihafa. Ny fomba nanaovan'izy ireo "fankalazana" ny Fanasan'ny Tompo. Notsaboina tsara kokoa ny manankarena, fa ny hafa kosa voahilika tamin'ny fandraisana anjara. Ny fanavakavahana dia namboarina izay tsy manaraka ny ohatr'i Jesoa ary nandika ny fanahin'ny filazantsara.
Na dia i Jesoa Kristy aza no ivon’ny fankalazana ny Fanasan’ny Tompo, dia tsy tokony hodian-tsy hita ny maha-zava-dehibe ny firaisan’ny tenan’ny mpino Andriamanitra. Raha iray ao amin’i Jesosy isika dia tokony ho iray koa. Rehefa niresaka momba ny tena fankasitrahana ny tenan’ny Tompo i Paoly (1. Korintiana 11,29), tao an-tsainy koa io lafiny io. Momba ny fifandraisana ny Baiboly. Ny fahafantarana ny Tompo dia tsy fampiasan-tsaina fotsiny. Ny diantsika isan’andro miaraka amin’i Kristy dia tokony ho amin-kitsimpo sy mafy ary tena misy. Afaka miantehitra amin’i Jesosy foana isika. Zava-dehibe aminy isika. Ny fihomehezanay, ny ahiahinay, dia hitany avokoa. Rehefa manohina ny fiainantsika ny fitiavan’Andriamanitra ary manandrana ny fahasoavany any an-danitra tsy hay lazaina isika, dia mety hiova ny fomba fisainantsika sy ataontsika. Te ho olona masina noeritreretin’ny Mpamonjy antsika isika. Eny, tsy maintsy miady amin’ny fahotantsika manokana isika. Fa ao amin’i Kristy no nanambarana antsika ho marina. Amin’ny maha-iray antsika sy ny fandraisantsika anjara amin’izany no ihavanantsika amin’Andriamanitra. Tao aminy no nanamasinana antsika sy nohamarinina ary nesorina ny sakana izay nanasaraka antsika tamin’Andriamanitra. Rehefa manota araka ny nofo isika dia vonona hamela heloka mandrakariva Andriamanitra. Koa satria mihavana amin’ny Mpamorona isika, dia te hihavana koa.
Ny sasany amintsika dia mety hiatrika tsy fitovian-kevitra izay nihaonan'ny mpiara-miasa na ny ankizy, ny havana, ny havany na ny mpifanila trano. Indraindray izany dingana sarotra. Ny avonavona headstrong dia afaka manakana ny lalantsika. Mitaky fanetren-tena. Tian'i Jesosy ny mahita ny vahoakany miezaka mihavana amin'ny fotoana rehetra azo atao. Rehefa miverina i Jesosy Kristy - hetsika iray resahina amin'ny fanasan'ny Tompo - dia ho iray aminy isika. Tsy misy na inona na inona mampisaraka antsika amin'ny fitiavany ary ho voaro amin'ny mandrakizay isika amin'ny fikarakarany. Te hanatratra ireo naratra eto amin'ity tontolo ity izahay ary hanao ny anjarantsika mba hahitana ny Fanjakan'Andriamanitra hiseho amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainana ankehitriny. Andriamanitra ho antsika, miaraka amintsika ary amin'ny alalantsika.